Itoobiya iyo DP World oo kala saxiixday heshiis ku saabsan wadada Berbera | KEYDMEDIA ONLINE
Itoobiya iyo DP World oo kala saxiixday heshiis ku saabsan wadada Berbera
Dalka Itoobiya iyo Shirkadda DP World, ayaa ka saxiixday heshiis ku aaddan hormatinta wadada Berbera Corridor, ee dhinaca Itoobiya.
ADDIS ABABA, Itoobiya - Dowladda Itoobiya iyo Shirkadda DP World, ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ujeedkiisu yahay horumarinta waddada xariirisa Itoobiya iyo magaalada Berbera ee Soomaaliland, kaas oo aysan goob joog ka ahayn Maamulka Soomaaliland iyo Dowladda Fadaraalka midna.
Is-fahamka, oo lagu kala saxiixday magaalada Addis Ababa, waxaa qalinka ku duugay Wasiirka Gaadiidka ee Itoobiya, Marwo, Dagmawit Moges, iyo Sultan Ahmed Bin Sulayem, oo ah Agaasimaha guud ee shirkadda DP World.
DP World iyo la-hawlgalayaasheeda waxay qorsheynayaan inay maalgashi ku kacaya hal Bilyan oo doolar, ay marinka galiyaan 10-ka sano ee soo socota.
Sida ay sheegtay DP World waxaa ka go’an inay ku maal gashato illaa $442 milyan oo doolar, hormarinta iyo balaarinta dekedda Berbera, wajiga koobaad ee dhismaha dekedda ayaana hadda dhamaad ku dhow.
Jidkaan casriga ah, wuxuu faa’iido weyn u leeyahay dhinaca Itoobiya, wuxuuna u noqon doonaa mid ka mid ah marinnada ganacsiga ee muhiimka u ah iyaga, haddii si wanaagsan looga wada faa’iidetstana gobolka oo dhan ayuu anfici doonaa.
Wadadaan, waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah jidadka ugu dhakhsaha badan uguna waxtarka badan xamuulka Itoobiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay heshiiska dekadda Berbera ee u dhaxeeya Somaliland iyo shirkadda DP World, Baarlamaanka Soomaaliya ayaana 12 Maarso 2018, si buuxda u diiday heshiiskaas, inkastoo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uusa wali saxiixin.
Heshiiska dekedda Berbera ayaa dhigaya in shirkadda DP World ay maamulayso dekeda, iyada oo leh saami dhan 51%, halka Somaliland ay yeelanayso boqolkiiba 30%, Itoobiyana 19%.